Global Voices teny Malagasy » Nahafatesana Olona Maro Ny Horohorontany Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2017 5:53 GMT 1	 · Mpanoratra J. Tadeo Nandika (en) i Omar Ocampo, Raveloaritiana Mamisoa
Niharan'ny horohorontany roa mahery vaika tamin'ny Septambra 2017 i Meksika. Ny voalohany, izay 8.2 tamin'ny maridrefy Richter dia nitranga tamin'ny 7 Septambra ary niteraka fahafatesan'olona 100 teo ho eo , indrindra tany Oaxaca sy Chiapas  any atsimo-andrefan'i Meksika. Ny faharoa , izay nitranga tamin'ny 19 Septambra kosa dia nahafaty olona 250 farafahakeliny ary nisy faritra ravarava tokoa tao an-tanànan'i Mexico City sy fanjakana dimy tao afovoan'ny firenena.
Tsy afaka mankany Juchitán ianao raha tsy miaraka amin'ny olona mahafantatra ny lalana, satria misy ny fivakisan-dalana. Ankoatra izany, tezitra mafy ireo mponina avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa satria tsy nahazo fanampiana avy amin'ny governemanta, noho izany, nanafika ireo kamiao mpamatsy entana nankany Juchitán izy ireo. Manangona fanampiana eto izahay, izay zavatra entin'ny olona, azon'izy ireo avela eto aminay izany sy avy eto, horaisinay omena ireo tena voa mafy, fa tsy toy ny sarangan'ny mpitondra izay mangalatra  fotsiny ireo fanomezana.
Ao Mexico City, tsy hitsahatra ho daty miavaka ny ny 19 Septambra. Roa amby roapolo taona lasa izay, horohorontany roa mahery vaika no nandrava ny tanàna ka aina maherin'ny 12.000 no nafoy  tamin'izany. Toa fifanandrifian-javatra, tamin'ny 19 septambra 2017, nanozongozona ny tanàna indray ny horohorontany ora vitsy monja taorian'ny hetsika  fahatsiarovana fanao isan-taona ho fanentanana.
Tonga tany Perisur  aho (toeram-pivarotana iray any amin'ny faritra atsimon'ny renivohitra) mba hividy zavatra ary nanomboka teo ny hovitrovitra. Nilaza taminay ireo mpiambina fa tsy afaka miala izahay saingy rehefa niharatsy izany, dia nihazakazaka mihitsy aza izy ireo. Marobe ireo vehivavy niaraka tamin'ny zaza madinika ary notaritin-dry zareo nivoaka. Tena nahatsiravina izany, nihevitra aho fa ho faty rehefa nanomboka nianjera ny valin-drihana sasany.
Meksikana raiki-tahotra taorian'ny horohorontany 19 Septambra 2017. Sary nozarain'i  Raúl Morales ary nahazoana alalana ny famoahana azy eto amin'ity lahatsoratra ity.
Nampiasa ny tokotaniny hiatrehana ireo naratra izay tonga ny hopitalim-panjakana, tahaka ny Mexican Social Security Institute  (Ivontoerana Meksikana misahana ny Fiarovana ara-tsosialy) eto amin'ny sary ambany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/22/107646/
 niteraka fahafatesan'olona 100 teo ho eo: http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-muertos-chiapas-oaxaca/
 nahafaty olona 250 farafahakeliny : http://www.animalpolitico.com/2017/09/cdmx-sismo-deja-una-decena-edificios-derrumbados-danos/
 aina maherin'ny 12.000 no nafoy: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/17/1046211